Summer bese idonsa emoyeni, ngifuna ukuthamela ilanga, ukubhukuda, ukudlala noma nje ukuhamba esikhundleni abahlezi izindonga ezine. Futhi kunezindlela eziningi ukuzijabulisa kungakhathaliseki ukuthi izulu lihle, ikakhulukazi uma umoya liphuma khona. Yingakho abaningi banesithakazelo indlela yokwenza ikhayithi ekhaya. Phela, lokhu kuyinto ithoyizi kakhulu kokubili izingane zabo nabazali, bahlangana ndawonye futhi enikeza ithuba nesikhathi omkhulu. Ngaphezu kwalokho, akenze inyoka kungaba ngokushesha, kalula nangemali ephansi.
Ngakho, indlela yokwenza ikhayithi ngezandla zakhe? Lokhu kuzodinga uhla amathuluzi nezimpahla. Okokuqala, lokhu ephepheni. Okokuqala, kulungele nokuqeqeshwa kungcono akenze inyoka encane. Ngakho thatha ishidi elula ephepheni, omhlophe noma ezinemibala. inyoka White ke kungenziwa zaveza, ezinemibala kahle nokunye kuxhopha ngokwanele. Ngaphezu kwalokho, i-crayon edingekayo, sikelo, i ngethephu enamathelayo (zokubhala elula noma upende, ububanzi ngamasentimitha amabili), a puncher, izinti ezondile izinkuni, umbusi, obuncane amakhadibhodi, nentambo mncane (ngentambo obukhulu noma monofilament kwamamitha amathathu noma ngaphezulu ubude) futhi egqamile, enemibala tape (amamitha amabili).
Kungenzeka ukuba ngiqale umsebenzi zisuka, futhi kungenzeka ukulungiselela imidwebo pre. Indlela yokwenza ikhayithi? Isigaba sokuqala: kuyadingeka ukubeka phansi ukuthatha ephepheni ncamashi ngesigamu. Lokhu kwalandelwa umugqa idayagonali ngepeniseli nombusi wezwe. Kusukela ekhoneni engezansi kwesokudla le ukubaleka kancane esingaphansi kwesigamu, kusukela phezulu kwesobunxele kuya kwesokudla - ingxenye eyodwa kwezine ububanzi. Manje kubalulekile ukubeka umugqa okuholela bese ugoba umugqa we ungqimba iphepha (phezulu), bese unamathela eduze nesibaya umugqa tape. Ngokufanayo kusetshenzwe futhi ohlangothini reverse of the ishidi. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka amaphiko amabili, kanye keel.
Indlela yokwenza ikhayithi ekhaya ngaleso sikhathi? Sebenzisa induku lokhuni (kungathatha bamboo, uma ikhona). Itholakala nendawo engxenyeni okubanzi inyoka namaphiko linamathele ingcina tape ( umane ethe njo phezu izinti phezu ubude balo lonke). It kuvela esiphambanweni. Manje kudingeka tape. Izosebenza njengoba umsila inyoka, ngakho-ke kufanele zigxile ngemuva ithoyizi. Ngakho, nginqume amabili kwamamitha iribhoni futhi unamathisele ngobunono.
Njengoba ingxenye enkulu indlela yokwenza ikhayithi ekhaya, esiphethweni. Akukho okuningi. Okokuqala kumele uvule ithoyizi bese unamathisela obuncane tape ingxenye encane, futhi ukuze itholakala nhlangothi zombili zawo. Khona-ke, phakathi kwale ngxenye wafohla a therethrough imbobo weqa ekupheleni ngentambo (line ukudoba noma intambo). Ebophela emvinini. Ukuze kube lula ukulungisa ubude intambo, okuyinto unamathele ithoyizi, thatha olungiselelwe kusengaphambili pryamougolnichek amakhadibhodi. Kufanele kube ububanzi ukuze kwakulula Esandleni sakho. Kuyinto kuye, uwafake komunye umkhawulo intambo. Ukuze kube lula wanezela, intambo ku amakhadibhodi namandla futhi iteyipu ngaphezulu. Ngakho okunamathiselwe singamethemba lace ngeke uhambe phezu ephepheni. I last isigaba - emazombezombe le ntambo emshinini amakhadibhodi. Kunalokho, yebo, ungakwazi zithathele induku, a spool ezinkulu noma brusochek, umuntu njengoba ukhululekile.
Ngakho, umbuzo zendlela yokwenza ikhayithi ekhaya, zingaxazululwa kakhulu kalula futhi ngokushesha ngaphandle kokudinga eziningi umzamo futhi ukulungisa. Manje ungaqalisa ithoyizi esibhakabhakeni.
Ukwaluka izinaliti entanyeni
Umphetho phansi ngezandla zabo nomona abangane bakhe
Kungani kubalulekile ukuthatha multivitamin kwabesifazane abakhulelwe?
Bunin, "Cuckoo": wokuqukethwe indzaba lemfisha
Zubrovka (utshani): izakhiwo ewusizo kanye contraindications. Lapho utshani likhula zubrovka